Nhau - Zvitanhatu zvikuru mabhenefiti ekunwa tii iwe wausingazive
Zvakajairika kunwa tii muhupenyu. Vanhu vazhinji vanoona tii sechinhu chavanofarira, kunyanya vanhu vakura vanofarira kunwa tii. Wese munhu anoziva, saka tinonwa tii mazuva ese kuti tizive kuti chii chai. Zvakanaka here? Saka hazvina kukodzera here kuti vanhu vanwe tii? Mupepeti anotevera achatsanangura zvakadzama, ndinovimba vanoda tii vanogona kuziva matambudziko aya.
Ndezvipi zvakanaka zvekunwa tii
1. Kuvandudza kutsungirira kwemhasuru
Kunwa tii kunogona kuvandudza mhasuru kutsungirira. Izvi zvinodaro nekuti kune zvekare antioxidant chinhu chinonzi catechin iri muiyi, iyo inogona kuwedzera kugona kwemuviri kupisa mafuta, kunatsiridza tsandanyama kutsungirira, kubatsira kurwisa kuneta, uye kuwedzera nguva yekurovedza muviri. Kunwa green tea kazhinji kunonyanya kukosha.
2. Kuramba kune ultraviolet mwaranzi
Tea polyphenols zvinhu zvinogadziriswa nemvura. Kugeza kumeso nemvura yetii kunogona kubvisa kumeso kumeso, kuomesa pores, kuuraya utachiona, sterilize, uye kuramba kukwegura kweganda. Izvo zvinobatsirawo kudzikisira kukuvara kwemwaranzi ye ultraviolet muzuva kuganda. Iyo yakasikwa "sunscreen cream". ".
3. Ramba uri muchimiro
Nhaurirano yezve tii mu "Materia Medica Supplements" yeTang Dynasty yakataura kuti "kudya kwenguva refu kunokuita mutete", uye ongororo yesainzi yemazuva ano yakatsigira izvi. Iyo caffeine iri muiyi inogona kukurudzira kuchengetedzwa kweiyo gastric muto, kubatsira kugaya, uye kuwedzera kugona kwemuviri kupwanya mafuta. Ongororo dzekune dzimwe nyika dzakaratidzawo kuti kugara uchinwa tii kunogona kudzikisa chiuno chakakomberedza uye kudzikisa muviri mashoma index (BMI), zvichidaro kudzivirira chirwere cheshuga uye zvemwoyo uye chirwere checebrovascular.
4. Ramba radiation
Ongororo dzekune dzimwe nyika dzakaratidza kuti tii polyphenols nemaoxididhi avo anogona kutora zvimwe zvinhu zvine mwenje, kudzivirira maseru kubva mukukuvara kwemwaranzi, uye zvakare anobatsira kugadzirisa maseru akakuvara. Zvidzidzo zvemakiriniki zvakaratidza kuti tii inotora inogona kurapa zvinyoro radiation radiation kurwara kunokonzerwa nethumba varwere panguva ye radiotherapy, uye kudzikiswa kwemasero eropa uye machena masero eropa anokonzerwa nemwaranzi inoshanda kwazvo.
5. Kuvandudza ndangariro
Kunwa tii kune imwe mhedzisiro pakuvandudza ndangariro. Zvidzidzo zvakaratidza kuti tii polyphenols muiyi inogona kunatsiridza huropi munharaunda, nokudaro ichiwedzera ndangariro uye nekuvandudza kugona kwekudzidza. Ongororo dzekunze dzakasimbisa kuti kunwa tii kunogona kudzivirira nekurapa chirwere chetsinga, kunyanya kushushikana kwekushushikana. Uye zvakare, caffeine inogona kukurudzira iyo yepakati tsinga system, uye ine mhedzisiro yekuzorodza, kufunga, uye kujekesa moyo.
6. Kuvandudza kuwedzera kwemapfupa
Kunyangwe tii iine caffeine, iyo inogona kusimudzira kurasikirwa kwecalcium nekuita weti, zvirimo zvakaderera zvakanyanya. Kunyangwe iyo nhema tii ine yakakwira caffeine yezvinyorwa inongova 30 kusvika 45 mg pamukombe. Muchokwadi, tii ine zvimwe zvinhu zvinobatsira kudzikisa kurasikirwa kwecalcium, kusanganisira fluorine, phytoestrogens uye potasium. Chidzidzo cheTaiwan chakawana kuti vanhu vanogara vachinwa tii vane huwandu hwakanyanya hwemapfupa uye mukana wakaderera wekutsemuka kwechiuno.
Kune marudzi manomwe evanhu vasina kukodzera kunwa tii
1. Vanhu vane kuzvimbirwa
Vanhu vane kuzvimbirwa havana kukodzera kunwa tii, nekuti ura hausi kuoma panguva yekuzvimbirwa, saka zvakakodzera kudya zvimwe zvekudya zvinonyorovesa ura, uye zvimwe zvinoshandiswa muiyi zvine zvimwe zvinokanganisa maronda emudumbu. Iyo yekugaya uye yekumwikidza basa rechikafu chinoita stool kuoma uye clumps, zvichikonzera kupatira kana kuwedzera.
2. Vanhu vane neurasthenia uye kushaya hope
Nekuti iyo caffeine iri muiyi ine yakajeka mhedzisiro inokanganisa maitiro epakati emuviri wemunhu, kunwa tii, kunyanya kunwa yakasimba tii, kuchaita kuti huropi hwemunhu munzvimbo yakanyanyisa-kufara isina zororo.
3. Kupererwa neropa
Nekuti iyo tannic acid iri muiyi inosiya simbi iri muchikafu kuti iite zvinonaya zvisina kunyudzwa nemuviri.
4. Vanhu vane calcium calcium kana mapfupa akavhunika
Nekuti maalkaloid ari muiyi anogona kutadzisa kunwa kwe calcium mu duodenum. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kukurudzira kubuda kwecalcium mune weti, ichiita kuti muviri uve mushoma calcium mukati nekubuda, zvichitungamira kukushomeka kwecalcium uye osteoporosis, zvichiita kuti zvive nyore kupora kubva kutsemuka.
5. Vanhu vane maronda emudumbu
Nekuti pane phosphodiesterase mudumbu revanhu inogona kutadzisa kusevha kwegastric acid nemasero eparietal, uye theophylline muiyi ichaderedza mashandiro ephosphodiesterase, zvichikonzera masero eparietal kuburitsa yakawanda yegastric acid.
6. Varwere veGout
Nekuti iyo tannic acid iri muiyi inowedzera mamiriro emurwere, hazvikurudzirwe kunwa tii, uye hazvikurudzirwe kunwa tii iyo yakanyudzwa kwenguva refu.
7. Vanhu vane BP kana chirwere chemwoyo
Iyo caffeine iri muiyi ine simba rakasimba-rinosimudzira muviri wemunhu, uye kuita kwekufara uku kuchakanganisa zviitiko zvemuviri uye kugadzirisa zvimwe zvakakosha metabolism.
Ndezvipi kusanzwisisana kwekunwa tii
1. Kufarira kunwa tii nyowani
Nekuda kwenguva pfupi yekuchengetera yeti nyowani, ine yakawanda isina-yakasungwa polyphenols, aldehydes, doro nezvimwe zvinhu, zvine simba rakasimba rekusimudzira pamunhu mucosa mucosa uye zviri nyore kukonzera chirwere chegastric. Naizvozvo, iwe unofanirwa kunwa shoma nyowani tii, uye dzivisa kunwa tii nyowani yakachengetwa isingasviki hafu yemwedzi.
2. kunwa tii pese pese
Sezvo iyo tii yakasvibiswa nemishonga yekuuraya zvipuka uye nezvimwe zvinokuvadza panguva yekurima nekugadzirisa, pachagara paine huwandu hwakawanda hwemasara pamusoro peti. Naizvozvo, kekutanga iyo tii ine yekushambidza mhedzisiro, inofanirwa kuraswa.
3.kunwa tii padumbu risina chinhu
Kunwa tii pane isina chinhu mudumbu kunogona kudzikisa gastric muto, kudzikisira kugaya basa, uye kuwedzera kunwa mwero wemvura, zvichikonzera huwandu hwakawanda hwezvinhu zvisingadiwe muiyi kupinda muropa, zvichikonzera dzungu, kurova, kushaya simba mumaoko nemakumbo uye zvimwe zviratidzo.
4. kunwa tii mushure mekudya
Tea ine yakawanda tannic acid. Tannic acid inogona kuita nechinhu chesimbi muchikafu kuburitsa zvinhu zvitsva zvinonetsa kuparara. Nekufamba kwenguva, zvinogona kukonzera kushomeka kwesimbi mumuviri wemunhu uye kunyange kukonzera kupererwa neropa. Nzira chaiyo ndeiyi: inwa tii awa imwe chete mushure mekudya.
5. iva nefivha uye unwe tii
Tea ine theophylline, iyo ine mhedzisiro yekusimudza tembiricha yemuviri. Kunwa tii yevarwere vane fivhiri kwakafanana nekuwedzera huni kumoto.
6. maronda varwere vanonwa tii
Iyo caffeine iri muiyi inogona kukurudzira gastric acid secretion, kuwedzera gastric acid yekumanikidza, kukurudzira maronda uye kunyangwe kupora.
7.kunwa tii panguva yekutevera
Kunwa tii panguva yekuenda kumwedzi, kunyanya yakasimba tii, kunogona kukurudzira kana kuwedzera kumwedzi chirwere. Nyanzvi dzezvokurapa dzakaona kuti tichienzanisa neavo vasinganwe tii, njodzi yekunetseka kwekuenda kumwedzi yakawedzera zvakapetwa ka2,4 kune avo vane tsika yekunwa tii. Avo vanonwa vanopfuura makapu mana etii pazuva vane katatu zvakapetwa.
Mwaka mina yegore inoita kuti mamiriro ekunze akasiyana, uye mhando dzeti dzinofanira kuchinjika zvinoenderana. Inokurudzirwa kunwa tii inonhuwirira mukati megore. Inonhuhwirira tii inogona kuparadzira utachiona hutachiona hunoungana mumuviri munguva yechando uye kukurudzira kukura kweyang mumuviri wemunhu; muzhizha, green tea yakakodzera kunwa. Green tii ine inovava uye inotonhora hunhu. Maronda eganda, mamota, hutachiona, nezvimwewo; mumatsutso, green tea inokurudzirwa, iyo isingatonhora kana kupisa, iyo inogona kubvisa zvachose kupisa kwakasara mumuviri, kudzorera kutapira uye kudziya, uye kuzorodza vanhu; inwa tii nhema munguva yechando, inotapira uye inodziya, yakafuma mumapuroteni, Ine chimwe chinhu chinovaka basa.
Pfupiso: Kubudikidza nechinyorwa chino, tinoziva kuti kunwa tii kune zvakawanda zvinoitika, sekuvandudza kutsungirira kwemhasuru, kudzivisa mwaranzi yeultraviolet, kuchengetedza chimiro chemuviri, kurwisa radiation, kugadzirisa memory, kugadzirisa density yemapfupa, nezvimwewo, asi kunwa tii hakuna kukodzera kune wese munhu , sevanhu vane kupatirwa. Vanhu vane neurasthenia, kushaya hope, kushomeka kwecalcium kana mapfupa akavhunika, BP kana chirwere chemwoyo havana kukodzera kunwa tii.